Knowledge Archives - Top Media News - "သမီးလေး - သို့"
*ခေါင်းတွေ ထိုးကိုက်ပါတယ် ပေါက်ကွဲမတတ် (day 1 ) *လည်ချောင်းမှာ ယားပီးချောင်းခြောက်ဆိုးချင်လာပါတယ်(day 2) *အနံ့တဖြေးဖြေးလွင့်လာပါတယ် လုံးဝမပျောက်သွားသေးပါဘူး(day3) *ကိုယ်စားတဲ့အစားအစာတွေ အနံ့စပျောက်လာပီ အိမ်သာ အနံ့ဟင်းချက်တဲ့အနံ့ဘေးပတိဝန်းကျင်အနံ့လုံးဝ အရှင်းပျောက်သွားပါပီ (day4) စိတ်အေးအေးထားပါ စိတ်ကိုတင်းထားပါ စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်ထားပါ ဘာသောကမှ မရောက်ပါနဲ့…ဒီရောဂါသည် ကိုယ်ခံအားလျော့တဲ့အချိန်ဝင်လာတတ်ပီး ကိုယ်ခံအား ပြန်ပြည့်တဲ့အခါ သူ့အလိုလို ပြန်ထွက်သွားမှာပါ…. မိမိလုပ်ရမှာက ရောဂါအခံ ဆီးချိူ …
ဖုန်းမှန်ကွဲနေတာ ဆက်သုံးရင်ဖြစ်လာမယ့် ဘာဆိုးကျိုး​တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာသင်သိပြီးပြီလား
စမတ်ဖုန်း ကိုင်ဆောင်တဲ့သူတိုင်း အချိန်မရွေးကြုံတွေ့လာနိုင်တာကတော့ ဖုန်း မှန်သားပြင် ကွဲသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာ နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပမာဏ မဟုတ်တာကြောင့် အသစ်တစ်လုံးနဲ့ ချက်ချင်း လဲဖို့ဆိုတာလည်း သိပ်တော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။ မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ဖုန်းမှန်ကွဲ​နေပေမယ့် ဆက်သုံးတဲ့ မိတ်ဆွေ​တွေရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုလည်း ဒီ ဆိုးကျိုး​လေးတွေသိအောင် ဝေမျှ​ပေးလိုက်ပါဦး။ ဖုန်းမှန်ကွဲရာကနေ စိစိညက်ညက်ကြေနိုင်။ အက်ရာရှိနေတဲ့ ဖန်သားပြင် ဟာ ပြန်မကောင်းလာ နိုင်တဲ့ …
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး
” ဦးဇင်း ဖုန်းဆက်လို့ရလား ” ” ဟေ ရတာပေါ့ဘုရား ကိုရင်က ဘယ်သူဆီများဆက်မလို့လဲ” အေမ့ဆီကိုပါ ” ” ဖုန်းနံပါတ်ကော ပါရဲ့လား ” ” ပါပါတယ်ဘုရား ”လက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့ကတ္ထူစာရွက်လေး။” ဟာ ကိုရင် ဘယ်လိုများ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေရတာတုန်း” ပျောက်မှာစိုးလို့ သင်းပိုင်ထဲလိတ်ထားတာပြဲသွားတာဘုရား ”သြော် ကိုရင်ရယ် အမေ့ကို ဆက်သွယ်ရမယ့် ဖုန်းနံပါတ်လေးကို …
တရုတ်ပညာရှင်တွေကိုအမေရိကန်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု မရပ်တန့်ရင်တရုတ်ရှိ အမေရိကန်တွေကိုဖမ်းဆီးပစ်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရ ခြိမ်းခြောက်
တရုတ်ပညာရှင်တွေအပေါ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအမေရိကန် မရပ်တန့်ရင်တရုတ်နိုင်ငံထဲကအမေရိကန်တွေကိုဖမ်းဆီးပစ်မယ်လို့တရုတ်အစိုးရကခြိမ်းခြောက် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တရတ်နိုင်ငံက ပေကျင်းရှိအမေရိကန်သံရုံးအပါအဝင်လမ်းကြောင်းများစွာကနေအိမ်ဖြူတော်ကို၎င်းပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်း ဝေါ့စထရိဂျာနယ်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အစိုးရအကြား နောက်ဆုံးတင်းမာမှုဟာဇူလိုင်လ ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်တရားရေးဌာနကတရုတ်သုတေသနပညာရှင်လေးဦးကိုဖမ်းဆီးရာကနေစတင်ခဲ့တာပါ။အဆိုပါပညာရှင်လေးဦးဗီဇာလျောက်ထားရာမှာ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိကြောင်းဖုံးကွယ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အဲဒီအထဲကJuan Tangဆိုတဲ့ပညာရှင်ဟာ FBIကမဖမ်းဆီးခင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာတစ်လပုန်းခိုနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကတော့ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းအာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းကိုဖမ်းဆီးချိန်က ပေကျင်းအစိုးရဟာတန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကို ပြန်လာခွင့်မပေးခဲ့ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးသတိပေးခဲ့ကြောင်း ဝေါ့စထရိဂျာနယ်က ဖော်ပြသွားပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးအမေရိကန်ဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတရုတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဖော်ထုတ်တဲ့ကင်ပိန်းအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့အမေရိကန်မှာ ပညာသင်ကြားလိုတဲ့တရုတ်လူမျိုး၁၀၀၀ ကျော်ဗီဇာရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရအပေါ်ပိုတင်းမာတဲ့ဆက်ဆံမှုတစ်ရပ်အနေနဲ့ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ဟာတရုတ်ဟာကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်အစားထိုးဖို့အမေရိကန်နည်းပညာနဲ့စစ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုခိုးယူဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းစွပ်စွဲထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကနိုင်ငံသားတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုခရီးမသွားဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံခြားအစိုးရအပေါ်ဖိအားပေးဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တဲ့ နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လကတော့ ပေကျင်းအစိုးရဟာကနေဒါနိုင်ငံသား၂ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူလျိုပြုလုပ်မှုနဲ့စွဲချက်တင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ …
(၅)ယောက်စစ်ရင် (၁)ယောက်တွေ့နှုန်းအထိ တက်လာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ပြန်သုံးသပ်ရမယ့် ဗျူဟာမျာ
ထိန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ၅ယောက်စစ် ၁ ယောက်တွေ့ နှုန်းအထိ တက်လာတဲ့ ရန်ကုန် ဗျုဟာတွေ သေချာပြန်သုံးသပ်ရတော့မယ်။ (အမှန်တော့ပြောခဲ့တာကြာပြီ) နယ်တွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အစပိုင်း အဆင်ပြေသလိုလို နဲ့ နောက်ပိုင်းရန်ကုန်လိုဖြစ်လာမယ်။မြေကြီးလက်နဲ့ ပုတ်ရင်လွဲနိုင်ပေမဲ့ ဒီတိုင်းဆက်သွားရင် ကျိန်းသေပါတယ် တကယ်လည်း နယ်ဘက်တွေပျံ့ လာပါပြီ အဓိကသေနှုန်း လျော့ချဖို့က အဓိကပါ သေနှုန်းချဖို့က ၂ ချက်လိုတယ်။၁ က ကြိုတင် …
ငွေကြေးလာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေလား ရွတ်ဆိုသင့်သောအရဟံပဋ္ဌာန်းလာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်
အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာ လား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား? ဤဂါထာကို ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန်တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရပါမယ် တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။၂၄ရက်တိတိ နေရာမှန် အချိန်မှန်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။ မိမိ မွေးနေ့ကစတင်ပြီး ရွတ်ဆိုရပါမယ် ထိုရွတ်ဖတ် အဓိဌာန်ဝင်နေသော ကာလအတွင်းမှာ မိမိတက်နိုင်သော နှစ်သက်ရာဒါန တစ်ခုပြုပေးရပါမယ် အဖျက်များသောကြောင့် ဇွဲကောင်းဖို့ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ …
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း”နို(လ်)”(NOUL)ရဲ့ အရှိန်ကြောင့် မိုးသည်းထန်စွာထစ်ချုန်း ရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်၊ လျှပ်တစ်ပြက်ရေကြီး၊မြေပြိုတာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ မိုးဇလဌာနက သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုန်းမြင့်ဒေသအနီး နေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို သတိထားဖို့နဲ့ မြစ်ငယ်၊ ချောင်းငယ်တွေအနီး နေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့လည်း ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ဒီမနက် အစောပိုင်းခန့်မှန်းချက်အရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပူပိုငမုန်တိုင်း”နို(လ်)”(NOUL)ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့(Danang)ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၈၀)ခန့်အကွာ …
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး၏ သီတင်းကျွတ်လ လာဘ်လာဘဖွင့် ကျင့်စဉ်
သီတင်းကျွတ်လ လာဘ်လာဘဖွင့်ကျင့်စဉ်။ ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်။ သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁)ရက်နေ့တွင် နံနက် (၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ဖယောင်းတိုင် (၁)တိုင်၊ (၅:၀၀)နာရီတွင် (၁)တိုင်၊ (၆)နာရီတွင် (၁)တိုင်ပူဇော်ပါ။ ထိုနည်းတူ ညနေ (၅)နာရီတွင် (၁)တိုင်၊ (၆)နာရီ တွင် (၁)တိုင်၊ (၇)နာရီတွင် (၁)တိုင်ပူဇော်ပါ။ ပူဇော်ရာတွင် လင်ဗန်းထဲ ရေအနည်းငယ်ထဲ့၍ ပူဇော်ရန်ဖြစ်သည်။ နံနက် ပိုင်း ဖယောင်းတိုင်များ …
လူငယ်တွေကြားမှာ ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နိမိတ်ကြီးများနှင့် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး
နိမိတ်တဘောင်ဆိုတာမယုံကြည်လို့မရဘူးခုတွေ့လိုက်ရတဲ့တဘောင်ကို လေ့လာကြည့်ရင်မှန်သင့်သလောက်မှန်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။၅၆၇ဝယ် ရေတွေကြီးလို့၈ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်၉ဝယ်မြေခါသွက်သွက်ရမ်းလို့အကြမ်းစားကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်၃ကိုအစဉ်ဆောင် ၅ကိုထိမ်းလို့ကပ်စိမ်းကြီးကို ကျော်ကြမယ် ကျော်ကြကွယ် ကျော်ကြကွယ်မကြာခင် သေချာလာပါမယ် အပေါ်ကတဘောင်အရဆိုရင်၅၆၇ဝယ်ရေတွေကြီးလို့ ” ဆိုတာ၂၀၁၅/၁၆/၁၇မှာ ရေတွေကြီးလို့ဆိုလိုတာလို့ ယူဆပါတယ်။တကယ်လဲ ရေတွေကြီးခဲ့တယ၈ဆုံးမြေကြီးလှုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာက၂၀၁၈မှာငလျင်တွေလှုပ်နေတာဖြစ်ပြီး၉ဝယ် မြေခါသွက်သွက်ရမ်းလို့အကြမ်းစားကြီးလှုပ်လိမ့်မယ် ဆိုတာကတော့၂၀၁၉မှာငလျင်အကြီးစားကြီး လှုပ်မှာလို့ ပြောထားတာပါပဲ လူငယ်တွေပြောပြောနေတဲ့9 လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကား နဲ့ ခေတ်ထခဲ့တဲ့ထမင်းဝအောင်စားထားဆိုတဲ့စကားတွေကနိမိတ်တွေပါပဲ၃ကိုအစဉ်ဆောင်၅ကိုထိမ်းလို့ဆိုတာကရတနာသုံးပါးကိုဆောင်ပြီး၅ပါးသီလ စောင့်ထိန်းပါလို့တိုက်တွန်း နှိုးဆော်တာလို့ကျွန်တော်နားလည်သလိုတဘောင်အနက် ပြန်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် တဘောင် အကိုးအကားယူလာတဲ့ဆရာဦးမြင့်ခိုင်ကတော့ …
တရုတ်ဟောင်ကောင်မှာပါမက ဟောလိဝုဒ်မှာပါဇာတ်ကားရိုက်ရတာကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းကသိကြချစ်ခင်ကြတဲ့မင်းသားကြီးဂျက်ကီချမ်းကတော့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်အမြဲလိုလိုမှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိတတ်သူပါ။ အခုအခါမှ တော့မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ပါတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တစ် ခုပေးထားတာကိုမြင့်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေအထူးသဖြင့်သိပ်ကြားရလေ့မရှိဘူး။ မြန်မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပဲသိတယ်ဆိုပြီးမင်းသားကြီးဂျက်ကီချမ်းကပြောပါတယ်။ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချစ်ကြသူများနားစဉ်ရန်အတွက်မင်းသားကြီးဂျက်ကီချမ်းရဲ့ရုပ်သံဖိုင်လေးကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ယူနီကုတ်ဖြင့်ဖတ်ရန် မွနျမာလို့ပွောလိုကျတာနဲ့ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုပဲသိတယျလို့ဆိုတဲ့ဂကျြကီခမျြး တရုတျဟောငျကောငျမှာပါမကဟောလိဝုဒျမှာပါဇာတျကားရိုကျရတာကွောငျ့ကမ်ဘာတဈဝမျးကသိကွခဈြခငျကွတဲ့မငျးသားကွီးဂကျြကီခမျြးကတော့အိမျနီးခငျြးနိုငျငံတှအေပျေါအမွဲလိုလိုမှတျခကျြပေးလရှေိ့တတျသူပါ။ အခုအခါမှတော့မွနျမာနိုငျငံနဲ့ပါတျသကျပွီးမှတျခကျြတဈခုပေးထားတာကိုမွငျ့တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။မွနျမာနိုငျငံကသတငျးတှအေထူးသဖွငျ့သိပျကွားရလမေ့ရှိဘူး။ မွနျမာလို့ပွောလိုကျတာနဲ့ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆိုပဲသိတယျဆိုပွီးမငျးသားကွီးဂကျြကီခမျြးကပွောပါတယျ။အမဒေျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုခဈြကွသူမြားနားစဉျရနျအတှကျမငျးသားကွီးဂကျြကီခမျြးရဲ့ရုပျသံဖိုငျလေးကိုအောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ။အားလုံးပဲပြျောရှငျခမျြးမွကွေ့ပါစေ။